‘खोजी–खोजी विवाद निकाल्छन्’– मेयर शाक्य - संवाद - नेपाल
मेयर शाक्य | तस्बिर : भास्वर ओझा
विद्यासुन्दर शाक्य, काठमाडौँ मेयर
महानगरको मेयर भएपछि बागदरबार र काष्ठमण्डपको हकमा तपाईंले बोली फेर्नुको कारण के हो ?
दलीय सयन्त्रमा हुँदा पनि बागदरबार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । पुनर्निर्माणका क्रममा अगाडि बढ्दा पुरातत्व विभागले पत्र पठाएर नभत्काउनू भन्यो । सबलीकरण गर्दा ३९ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च लाग्ने र अफिसको रूपमा रहन नसक्ने विज्ञको रिपोर्ट आयो । त्यसैले भत्काउनुपर्छ भनेको हो । म्युजियम बनाउने हो भने अलग कुरा । नत्र महानगरपालिकामा दैनिक हजारौँ मान्छे आउजाउ गर्छन् । सबलीकरण गर्दा केही भयो भने कसले जिम्मा लिने ? पार्किङका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएकाले पुनर्निर्माण गरेर पार्किङसहित बनाउने भनेका हौँ । काष्ठमण्डपको सन्दर्भमा विज्ञको सल्लाहअनुसार काम भइरहेको छ ।
बागदरबारको ऐतिहासिक महत्त्व छ । यसलाई नभत्काई नहुने ?
बागदरबार भीमसेन थापाको दरबार हुँदै होइन, उजुरीमा पनि त्यस्तै लेखेको छ । यस्तो नभएको कुरा किन मिडियाले लेख्या लेख्यै गर्छन्, थाहा भएन । हरिभवन हो, नभएको कुरालाई किन उचालेको ? जग्गाधनी पूर्वराजाको मावली खलकले समेत यो कुरा मानिसकेका छन् ।
राणा परिवारले त नभत्काउनू भनेका छन् नि ?
आफ्ना पुर्खाको भएकाले नभत्काए हुन्छ भनेका हुन् । उनीहरूले हामीलाई दिनुपर्छ भनेर मागिरहेका छन् । अब माग्दैमा सबै दिने त ?
विश्वसम्पदा क्षेत्रमा ३५ फिटभन्दा अग्लो भवन बनाउन पाइँदैन । तर महानगरले ६५ फिटको नयाँ मापदण्ड किन ल्यायो ?
हामीले सम्पदा क्षेत्रलाई छोएका छैनौँ । कार्यविधि अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोला । सम्पदा क्षेत्रभन्दा बाहिरको हकमा भनेको हो हामीले ।
त्यसो भए महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्समा किन बेसमेन्ट बनाउने स्वीकृति दिनुभएको ?
यसमा अदालतले फैसला गरिसकेको छ । म के भनौँ र !
सम्पदा संरक्षणमा ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको गुनासो त्यसै बढेको होइन होला !
सम्पदा जोगाउन महानगर जति संवेदनशील कोही छैन । अभियन्ता होइन, सम्पदा संरक्षणमा हाम्रो जीवन बितेको छ । अभियन्ताले रोक्ने, बिगार्नेबाहेक केही गरेका छैनन् । रानीपोखरीमा हामीलाई काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो, सबैले ‘वाह वाह’ भन्थे ।
धरहरा भनेर भ्यु टावर बनाउँदै हुनुहुन्छ, होइन ?
नेपाल सरकारले पुरानो धरहरालाई संरक्षण गर्ने र नयाँ भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने निर्णय गर्‍यो । मैले के भन्न सक्छु र ? खोजी–खोजी विवाद निकाल्छन् यहाँ ।
उसो भए विज्ञ र स्थानीयको साथ किन लिन नसक्नुभएको ?
केही छन्, जो सबैलाई दु:ख दिन्छन्, सरकारी काममा अवरोध गर्छन् । समन्वय गर्दैनन् । ललितपुर र भक्तपुरमा यस्तो विवाद आउँदैन, यहीँ मात्र आउँछ । खोइ किन हो ?
यो पनि पढ्नुहोस् → सम्पदा मास्ने मेयर